Real Madrid oo tixgalineysa inay dib ula soo saxiixato xiddiga Tottenham Hotspur Sergio Reguilon | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Real Madrid oo tixgalineysa inay dib ula soo saxiixato xiddiga Tottenham Hotspur...
Real Madrid oo tixgalineysa inay dib ula soo saxiixato xiddiga Tottenham Hotspur Sergio Reguilon
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay dib ula soo saxiixato Sergio Reguilon xagaaga soo aadan, iyadoo bixineysa inay hoos u dhigi karto lacagta lagu burburin karo daafaca Tottenham Hotspur .
Isaga oo fursad yar u haysta inuu si joogto ah uga soo bilowdo Bernabeu, daafaca bidix ayaa loo oggolaaday inuu ku biiro Spurs 13 bilood ka hor iyadoo la filayay inuu iska dhigi doono dooqa koowaad ee Waqooyiga London.
Inkastoo 24 jirkaan uusan qasab ku aheyn inuu saameyn joogto ah ku yeesho Premier League, wuxuu kasoo muuqday 45 jeer tartamada oo dhan.
Sida laga soo xigtay Defensa Central , Los Blancos ayaa haatan ka fikireysa inay dib ula soo saxiixato xiddiga reer Spain inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Real ayaa la sheegay inay dooneyso inay hoos u dhigto qiimaha lagu burburin karo 40 milyan euro (34.01m) oo ay ka dhigeyso € 33m (£ 28.06m), codsigaas oo aan u badneyn inuu aqbalo guddoomiyaha Spurs Daniel Levy .
Previous articleFarmaajo oo ka qeyb-galay munaasabad ka dhacday VILLA SOMALIA + Sawirro
Next articleTaliyihii Nabad Sugidda Dayniile iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa oo qarax lagu dilay